Keyword Chinzvimbo cheYako Domain
Maitiro Ekutarisa Yako Domain's Rank neKiyi kiyi pane Nhare uye Desktop
Chipiri, April 21, 2015 Chipiri, April 21, 2015 Douglas Karr
Chinokosha chebudiriro yekutsvaga injini yekushambadzira inzira yekunzwisisa mazwi akakosha anotsvaga injini yekutsvaga kutsvaga kambani yako. Iwe unogona kushamisika kuti mangani makambani andinotaura navo asina kumboita chero kiyi yekutsvaga.
Mhedzisiro yekusaita tsvagurudzo muinternet nzira yekutengesa ndeyekuti kambani yako inomuka ichizivikanwa nekuda kwemashoko asina basa - kukwezva vashanyi vasiri ivo kuwebhusaiti yako kana blog. Google ine yakapusa tsvaga-yakavakirwa keyword chishandiso inoongorora saiti yako uye inokupa iwe mhinduro pane mazwi akakosha uye zvirevo zvakawanikwa… kutanga kwakanaka kuona kana uri munzira chaiyo.
Sezvo iwe uchiramba uchitarisa ako akakosha uye yako saiti, Google Search Console inopa nhoroondo yemazwi awakawanikwa muinjini dzekutsvaga, pamwe nemazita ari kutsvakwa nevanotsvaga kuburikidza newebsite yako.
Zvinotoshamisa kuti hazvo, hapana kana chishandiso cheGoogle chakaisa hurongwa hwese pamwe chete mune yakazara turueteti kumakambani kuti aongorore mazwi akakosha, achiaenzanisa nemakwikwi, uye nekutarisa masosi evhiki nevhiki. Ndipo pane Semrush inouya mumufananidzo.
Semrush chishandiso chakasimba zvine mutsindo cheKiyi uye Ongororo yekutsvaga. Heino ipfupi runyorwa rwezvinhu:
Tsvaga evakwikwidzi 'saiti neakajairika Google keywords
Tora runyorwa rweGoogle keywords kune chero saiti
Tora runyorwa rweAdWords keywords kune chero saiti
Tarisa makwikwi ako anomhara-mapeji eSE uye AdWords traffic
Wongorora marefu-muswe keywords kune chero duraini
Tora inofungidzirwa SE uye AdWords traffic kune chero duraini
Wona masayiti 'kushandisa kweAdWords
Wana zvakavanzika zvine chekuita (uye zvakachipa-mutengo) mazwi ekuwedzera yako AdWords mushandirapamwe
Tsvaga vanogona kushambadzira kune chero saiti
Tsvaga vanogona kutengesa vatengesi vesaiti yako
Uye ikozvino nekutanga kwe Google's algorithm inoshanduka kuve nechokwadi chekutsvaga kwekufambisa chete une nhare dzakagadziridzwa, Semrush yakavhura nhare yekutsvaga yekuongorora zvakare!
Kuti utarise hushamwari hwewebhusaiti, enda ku Semrush Mhedziso, uye nyora zita rewebhusaiti. Pamusoro pechirevo, iwe uchaona anosarudza iyo inokutendera kuti uchinje kubva kudesktop dhata kuenda kune data mbozha. Dzvanya icon yakakodzera kuti uone nhare analytics data uye kuratidza kuoneka kwewebhusaiti pane nhare mbozha.
Iyo Mobile Performance widget inoratidza chiyero chewebsite yako ma URL akaonekwa muSERPs aine chinyorwa "mobile-inoshamwaridzika," kune avo vasina iyo.
Iyo Yekutsva Performance girafu inoratidza huwandu hwemazwi akakosha webhusaiti ari kuisirwa muGoogle yepamusoro makumi maviri emahara emahara ehupenyu uye akabhadhara mhedzisiro yekutsvaga.
Iyo Position Distribution chati inoratidza kugoverwa kwemazwi akakosha ari pawebhusaiti mune mhinduro dzeGoogle dzepamusoro makumi maviri.
Mhedzisiro yacho yakakamurwa ne nhare-ine hushamwari uye mobile-isina hushamwari maitiro. Unogona kuona ako epamusoro mazwi.
Unogona zvakare kuona vako vepamusoro vakwikwidzi mukutsvaga kwefoni.
Iwe unogona kuona yakafanana data kune yakabhadharwa mitsva yekutsvaga.
Kuti uone kuti webhusaiti irikumisikidzwa sei mune nhare yekutsvaga mhinduro, enda ku Semrush → Organic Ongororo → Nzvimbo. Chirevo ichi chinonyora mazwi akakosha ayo webhusaiti iri pachinzvimbo cheGoogle chepamusoro makumi maviri ekutsvaga kwekufambisa, uye chinzvimbo chedome kune yega yega.
Ma URL akanyorwa nhare-ine hushamwari mumhedzisiro yekutsvaga ichaiswa mucherechedzo nefoni yefoni
Iyo yakakwira nhamba yemapeji ewebhu pasina ino icon inofanirwa kutariswa seyambiro, nekuti webhusaiti yako inogona kurangwa. Kuti udzivise kurangwa kubva kuGoogle uye nekuvandudza ruzivo rwevashandisi rwekutsvaga pawebhusaiti yako, unofanirwa kukwidziridza mapeji ako ewebhu zvinoenderana nemaitiro efoni-ane hushamwari. Tinokurudzira inopindura webhu dhizaini.
Kuziva mazwi akakosha ako tarisiro uye vatengi vari kushandisa kukuwana iwe kuburikidza nekutsvaga injini kwakakosha pakubudirira kwako. Kugadzira yakanaka, inodzidzisa, yepasirose-webhusaiti webhu haina basa kana ikasawanikwa neyakafanira kutsvaga! Yangu blog iri chaiyo muenzaniso ... Ini ndakakura saiti yakarongeka uye ndakaramba ndichiwedzera kuwedzera zvemukati sezvo ini ndichiwana ichifadza. Zvino ini tarisa keyword chinzvimbo nguva dzose!
Mhedzisiro yacho ndeyekuti yakawanda yemigwagwa yangu yakakodzera yakawanikwa kuburikidza neye organic search engine masosi. Dai ndaive ndaita yakazara yakakosha kiyi yekuongorora 1,600 mablog mablog apfuura uye ndikaona kuti ndakashandisa iwo mazwi akakosha zvinobudirira, handina mubvunzo kuti ndinenge ndichitungamira pakiti pane mazhinji ekushambadzira tekinoroji misoro.
Tags: desktop tsvaga masositsvaga chinzvimbogurukeyword chinzvimbonhare dzekutsvaga nharechinzvimbo nekiyi kiyisemrush
Maitirwo Akaita Kugadzirwa kuburikidza neKushambadzira Mashini
Jul 13, 2015 na11:31 PM